Ngwa kachasị mma 6 maka Instagram na gam akporo | Androidsis
Otu n'ime netwọkụ mmekọrịta ama ama na nke ejiri eme ihe n'ụwa, yana ndị ọrụ karịrị nde 1,200, bụ Instagram Ọ bụ nke ukwuu na, n'agbanyeghị na ị nwere ike enweghị akaụntụ n'ime ya ma i jitụbeghị ya, n'ezie ị nụla aha ya ọtụtụ oge na ndụ gị, ma ndị enyi ma ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọrụ ibe gị.
Inwe na iji Instagram dị mfe. Ọ na -enye gị ohere ijikọ na nde mmadụ gburugburu ụwa, naanị site na ibugo foto, vidiyo na reel, na ịza ajụjụ n'akwụkwọ ndị ọzọ yana iso ndị ọrụ ndị ọzọ na -emekọrịta ihe. Maka ọrụ ndị ọzọ, atụmatụ na akụkọ na -atọ ụtọ gbasara ọnụ ọgụgụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, enwere ọtụtụ ngwa na Storelọ Ahịa Play, n'ihi nke ahụ anyị na -egosi gị. ngwa 6 kacha mma maka Instagram na gam akporo.
N'okpuru ị ga -ahụ usoro nke ngwa Instagram kacha mma maka smartphones Android. Ọ dị mma ịmara, dịka anyị na -eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemu nkwụnye ụgwọ nke dị n'ime, nke ga-enye ohere ịnweta atụmatụ adịchaghị na ịnweta atụmatụ ndị ọzọ, n'etiti ihe ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ihe ọzọ bụ na ọtụtụ ngwa ị ga-ahụ ebe a nwekwara ọrụ izi ozi ozugbo na / ma ọ bụ nwee agwa mgbasa ozi mmekọrịta, ya mere ihe karịrị otu ga-amara gị. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Budata Instagram Videos- AhaSave Downloader
2 Nlele maka nri Instagram: onye nhazi
3 Onye na -eme Post maka Instagram - PostPlus
4 Onye mere akụkọ - Insta Akụkọ akụkọ maka Instagram
5 Nkuzi: mepụta kọleji na vidiyo maka akụkọ IG
6 Ndị na -eso ụzọ - enweghị ndị na -eso ụzọ
Budata Instagram Videos- AhaSave Downloader
Instagram anaghị enye gị ohere ibudata vidiyo nke mbipụta, yana nwa nwoke, nke ahụ nwere ike ịda mba mgbe ụfọdụ, n'ihi na anyị chọrọ inwe ya na ekwentị ọ bụghị site na netwọkụ mmekọrịta. Agbanyeghị, enwere ike ibudata ha, otu n'ime ụzọ isi mee ya bụ site na ngwa a.
Ọrụ ya dị nfe: naanị ị ga -e copyomi njikọ njikọ vidiyo ị họọrọ wee tinye ya na ngalaba adreesị AhaSave Donwloader. Wayzọ ọzọ ị nwere ike họrọ bụ ịkekọrịta njikọ, nke ị ga -eji họrọ ngwa a ka nbudata wee malite na akpaghị aka. Nke kacha mma bụ na Ọ na -enyekwa gị ohere ibudata foto na onyonyo na Instagram n'otu ụzọ ahụ, n'agbanyeghị na maka nke a, a na -ewerekarị nseta ihuenyo, yabụ isi ọrụ nke ngwa a bụ ibudata vidiyo na netwọkụ mmekọrịta.
Otu n'ime ihe kacha mma gbasara ngwa a bụ na enweghị mgbasa ozi na mgbasa ozi, yabụ ojiji ya dị ụtọ yana interface ọ na -etu ọnụ dị ọcha ma hazie ya, dịkwa oke nfe ma dịkwa mfe iji. Na mgbakwunye, njirimara ndị ọzọ nke ngwa a bụ na ọ na -enye gị ohere ịmalite nbudata akpaka, chekwaa akụkọ - ọbụlagodi na egwu na nsonaazụ ụda- wee budata foto profaịlụ na reel Instagram TV na vidiyo ịchọrọ.
N'aka nke ọzọ, Ọ bụ ngwa dị mfe nke nwere ihe dịka 25 MB. Ọ bụkwa ngwa kachasị n'ụdị ya na Storelọ Ahịa Play, yana ezigbo aha 4.8, ihe nbudata ihe karịrị nde 10, yana nyocha dị mma karịa 540.
Nlele maka nri Instagram: onye nhazi
Ọtụtụ oge anyị chọrọ ịma ka foto na mbipụta anyị chọrọ bulite na Instagram anyị ga -adị. Ihe dị njọ bụ na ngwa ahụ enweghị ọrụ na -enye anyị ohere ịhụchalụ ndepụta ahụ, mana ngwa a dị maka nke a, iji mee ka anyị mara ma ọ bụ ezi echiche bulite onyonyo ma ọ bụ foto mgbe nke gara aga nke anyị ebugolarị na netwọk mmekọrịta.
O zuru ezu ịkọ nkọ ka profaịlụ na nri gị ga -adị na Instagram. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ ilekọta akụkụ a wee nye onyonyo ahaziri nke ọma dabere na foto ị na -ebipụta, n'ezie ngwa a ga -amasị gị ọ ga -enyere gị aka inwe nzukọ ka mma na Instagram.
Nhụchalụ maka Instagram
Onye na -eme Post maka Instagram - PostPlus
N'ozuzu, mgbe anyị bulite foto ma ọ bụ onyonyo anyị chọrọ ka ọ nweta ọtụtụ ihe na -amasị. Iji mezuo nke a, a na -atụ aro ka ọ bụrụ foto nwere ezigbo ndabere, ezigbo ọkụ na ihu ma ọ bụ ọnọdụ 10. Agbanyeghị, gafere nkọwa ndị a, ọdịiche nwere ike ịdị na nhazi mbụ nke a, ma ọ bụrụ na ọ nwere ezigbo usoro. , ụfọdụ mmetụta ma ọ bụ ọ nwere ndebiri na -atọ ụtọ. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị Onye Mmepụta Post maka Instagram - PostPlus, ngwa efu nke nwere okpokolo agba dị iche iche, ndebiri, nhazi na ngwaọrụ iji meziwanye foto na onyonyo anyị chọrọ bulite.
Ngwa a bara uru maka megharịa posts na akwụkwọ mmado maka Instagram, yana nhọrọ niile, ọrụ na njirimara n'ogo nke imewe, ndezi na mgbanwe nke onyonyo. Anọgidela na -achọ ihe na otu esi eme ngwa mgbasa ozi gị na ngwa na ịntanetị ndị ọzọ; Site na onye na -eme Post maka Instagram - PostPlus ị nwere ha niile.
Onye na -eme Post maka Instagram
Onye mere akụkọ - Insta Akụkọ akụkọ maka Instagram
Ọtụtụ nde ndị ọrụ na -ebugote akụkọ na Instagram kwa ụbọchị. Ụfọdụ bụ foto dị mfe, ndị ọzọ bụ vidiyo. Enwekwara onyonyo ma ọ bụ memes nke ha na -ekerịta site na ndị a, mana mgbe a bịara ụbọchị ọmụmụ, ekele ma ọ bụ oge pụrụ iche, anyị na -achọkarị ibugote akụkọ okike karịa, mana ọtụtụ oge anyị amaghị etu esi eme ya.
Ọ dabara nke ọma na enwere Onye na -eme akụkọ - Insta Story Editor maka Instagram, ngwa ndezi na -enye gị ohere idezi foto, onyonyo na ihe ndị ọzọ. ihe karịrị 500 usoro okike na ndebiri iji bulite na akụkọ. Naanị họrọ ma họrọ foto ole na ole na gallery gị, wee jiri usoro, ederede, nzụlite omenala, mkpuchi olu na ihe ndị ọzọ chọọ ha mma. Ị nwere ike ịmepụta ihe ọchị, mara mma, ihunanya ma ọ bụ kọleji pụrụ iche. Ihe niile dị n'aka gị site na ngwa a.
Ị nwere katalọgụ sara mbara nke ukwuu ebe ị nwere ike họrọ site na narị ndebiri iji mepụta posts na netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook, yana Instagram, na ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ, Ị nwere ike họrọ agba ma ọ bụ foto ọ bụla ma ọ bụ onyonyo ọ bụla ị nwere na gallery ka ịhọrọ dịka ndabere. Ihe okike dị mkpa iji ngwa a, ebe ọ na -abịa n'ọtụtụ nhọrọ, ọrụ na akụrụngwa ka ị nwee ike mee ka echiche gị fewe wee mee akụkọ okike na akụkọ mbụ.
Na -egosipụta ọtụtụ mkpụrụedemede na ụdị ederede (ụdịdị) ịhọrọ ma mee ka akụkọ ndị ahụ nwee mmetụ mbụ; ajụjụ, enwere ụdị mkpụrụedemede karịrị 100 ịhọrọ site na. N'aka nke ya, ọ ga -ekwe omume idezi ma gbanwee agba nke ederede ka ọ masị gị, tọọ ntọala dị ka etiti, aka ekpe ma ọ bụ aka nri, wee hazie oghere, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ego o nwere dị ọtụtụ. N'ezie, na mgbakwunye na onyonyo ị nwere ike họrọ iji dị ka ndabere, ị nwekwara ike rụọ ọrụ pen onye na -ahọrọ ụcha iji nweta agba ọ bụla na foto ahụ wee hazie ya dịka ịchọrọ. Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike ịchekwa aghụghọ gị na nnukwu mkpebi wee bulite ha na Instagram, Facebook, WhatsApp na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla ma ọ bụ ikpo okwu ịchọrọ.
Nkuzi: mepụta kọleji na vidiyo maka akụkọ IG
Ngwa ọzọ mara mma maka ibugote akụkọ okike na Instagram bụ ụlọ akwụkwọ, nke aha ya na -egosi, ị nwere ike ịmepụta kọleji dị iche iche nwere ọtụtụ ụdị ka akụkọ gị na onyonyo gị wee pụta ma dọtakwuo anya.
Ngwaọrụ a nwere akwụkwọ ndebiri iji mee ka akụkọ ndị dị na akụkọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ ma mara mma. N'otu oge ahụ, ọ nwere ọtụtụ atụmatụ edezi vidiyo nke ga-eme ka ha yie ọkachamara zuru oke yana dezie ya nke ọma, yana ọtụtụ ihe ọchị na ihe pụrụ iche, ụdị mmetụta dị iche iche, egwu, mkpụrụedemede okike na ọmarịcha na ndị ọzọ.
N'ezie, n'ihe gbasara egwu, nke ngwa nwere maka gị enweghị ikike nwebisiinka, yabụ ị nwere ike iji ya na akụkọ gị yana ihe ọ bụla batara gị n'obi na -enweghị nsogbu. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ụzọ egwu echekwara na ama ama gam akporo gị.
Ọzọkwa, ị nwere ike ọ bụghị naanị iji Eserese na collages gị na Instagram, kamakwa na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ dị ka Facebook na ngwa izi ozi dị ka WhatsApp.
Akụkọ: Mepụta Akụkọ Insta
Developer: Ụlọ ọrụ Ylee Studio LTD
Ndị na -eso ụzọ - enweghị ndị na -eso ụzọ
Otu ụzọ dị mfe ịmara onye na -anaghị eso gị na Instagram na -ejighị aka tinye profaịlụ nke ndị na -eso ụzọ gị niile bụ site na ngwa a. Naanị ihe ị ga -eme bụ banye na Instagram ka ọ nyochaa ndị na -eso ụzọ gị niile wee soro ya, wee gosi gị ndị ọrụ niile ị na -eso ma ghara iso gị azụ. N'ụzọ dị otu a, naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike kwụsị iso ha, nke kachasị, ịkwesighi ịhapụ ngwa ahụ wee mee ya.
Site na ngwa a maka Instagram ị nwekwara ike lelee ndị na -eso ụzọ ibe ha na ịgbaso ha, yana akaụntụ ndị ahụ ị naghị eso. Ị nwekwara ike ịma onye ị na -eso na ndị ọzọ. Ọ bụ dị mfe iji, ebe ọ na -abịa na interface dị mfe yana ogwe nhọrọ ya na -egosi ntinye niile dị. N'otu oge ahụ, ọ bụ ngwa na -adịchaghị mma, nwere ihe dị ka 8 MP yana aha na Play Store nke kpakpando 4.2.
Developer: Otu Labs
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma 6 maka Instagram na gam akporo
Etu ị ga - esi nwetaghachi nsogbu nke ezinaụlọ